Banyere Anyị - Shandong Huashili akpaaka Technology Co., Ltd.
Shandong Huashili Automation Technology Co., Ltd. emi odude ke Rizhao obodo, tumadi aka na ọgụgụ isi akpaka iko loading labeling na ịcha niile na-na-na igwe, akpaka iko ọnwụ igwe, akpaka NC multi-mma ịcha igwe, akpaka iko ọnwụ nzukọ akara, akpaka iko loading igwe, akpaka sintered nkume ọnwụ igwe, na iko onu egweri igwe.
Huashili technology bụ a set nke n'ibu akụrụngwa akpaaka nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa na otu nke elu-tech n'ichepụta ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ nwere a akụ na ụba nke n'ibu akpaaka ngwá mmepụta mmepụta, ikike ike, na nkà na ụzụ larịị na mbara akụ na ụba ike na otu ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ nke anụ ụlọ ụlọ ọrụ, ọgụgụ isi akpaaka ngwá nnyocha na mmepe, ihe onwunwe akara, akụrụngwa arụmọrụ na ịme ngosi uwe anọwo na anụ ụlọ na-eduga n'ọkwa, ọtụtụ usoro. emejuola oghere ụlọ. Ihe dị mma mgbe - ọrụ ahịa na ọnụahịa ezi uche dị na ya, ruo ogologo oge iji merie otuto ndị ahịa. Na akara na ụkpụrụ nke "ezi okwukwe mbụ, ahịa afọ ojuju", anyị ụlọ ọrụ eguzobewo ogologo oge ekwenye mmekọahụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Anyị ụlọ ọrụ mmepụta ngwá nwere àgwà nke ezi mma, elu kpọmkwem, obere n'ala ebe, ibughari, obere ego, ngwa ngwa mmetụta na na, nke bụ ezigbo ngwaahịa maka iko miri nhazi ụlọ ọrụ.
Anyị ji obi anyị na-anabata gị ka ị bịa ma kparịta ụka anyị.
Dabere na ụkpụrụ nke 'iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, ahịa afọ ojuju', anyị ụlọ ọrụ eguzobewo ogologo oge ekwenye mmekọahụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Na-abanye 2020, ụlọ ọrụ ahụ abanyela atụmatụ afọ ise ọ bụla ma ọ dị otu nzọụkwụ dị nso ịghọ akara ngosi na ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi. Ulo oru di iche iche nke ulo oru a mepere emepe, teknụzụ nke teknụzụ na-agbanwe agbanwe karị, njikwa mmepụta ihe na-akawanye mma, na azụmaahịa azụmaahịa na-ahazi nke ọma. Ndị Huashili ga-enweta ohere na ihe ịma aka ndị ọhụrụ site na iji obi ziri ezi na imeghe. Companylọ ọrụ a na-ewere mgbanwe nke teknụzụ na arụpụta ihe dị ka ebumnuche ya, ma na-agbasi mbọ ike maka ndụ iji nyere aka mmepe mmepe nke China.